Shiinaha Liquid qaybta Warshadda, Qaybta dareeraha qaybiyaha
ALC Mashiinka mashiinka wax lagu xiro ee loogu talagalay dalabka caagagga / dhalooyinka dhalada ah. Mashiinka waxaa ka kooban gawaarida xamuulka qaada, dhalada giraanta tusmada, daboolka aan la goyn karin, daboolka furka & caaga, furka furka. Dhalada ku shubista / dejinta adoo maraya gawaarida gacanta, ama si toos ah toos uga soco khadka wax soo saarka. Waxaa loo qaabeeyey oo loo sameeyey si waafaqsan nidaamka GMP.
ALF-60 Rotary-Type Liquid Buuxinta, Xirashada iyo Xiritaanka Monobloc
Mashiinka ayaa ah nashqad buuxin otomaatig ah oo ka kooban PLC, isku xirnaanta aadanaha iyo kombiyuutarka, iyo dareeraha optoelectronic iyo hawo ku shaqeysa. Ku darmay buuxinta, ku xirida, xirashada iyo isku shaandheynta hal cutub .Waxay leedahay faa iidooyinka saxsanaanta sare, waxqabad xasiloon iyo kala duwanaansho weyn marka loo eego xaaladaha hawlgalka xad dhaafka ah ee lagu raaxeysto sharaf sare Waxaa si ballaaran loogu adeegsaday aagagga warshadaha dawooyinka, gaar ahaan ku habboon buuxinta dareeraha iyo xiritaanka iyo sidoo kale dhalooyinka kale ee mugga yar.
ALFC Taxanaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Iyo Capping Monobloc
Mashiinka Buuxinta iyo Mashiinka Xaraashka ee loogu talagalay buuxinta dareeraha khafiifka ah iyo duubista caagagga ama dhalooyinka dhalada ah. Mashiinka waxaa ka kooban gawaarida, bamka piston-ka volumetric-ka ee loo yaqaan 'SS316L volumetric pump', mashiinka buuxiya xagga sare-hoose, haanta dareeraha ee keydka, dareeraha tusmada dhalada, nidaamka xiritaanka. Dhalada / dejinta dhalada iyada oo la raacayo rarka / soo dejinta (u beddel Ø620mm ama Ø900mm), ama si toos ah khadka wax soo saarka.
Mashiinka buuxinta ALF Automatic Volumetric ee loogu talagalay codsiga dareeraha fudud ee buuxinta dhalooyinka caaga ah ama dhalooyinka ah. Mashiinka waxaa ka kooban gaari xambaara, bamka piston-ka volumetric-ka ee loo yaqaan 'SS316L volumetric pump', mashiinnada buuxiya xagga sare-hoose, haanta dareeraha ee keydka iyo dareeraha dhalada. Dhalada / dejinta dhalada iyada oo la raacayo / la soo dejinayo ujawaab ama si toos ah khadka wax soo saarka.
Mashiinka Buuxinta & Mashiinka Xidhitaanka ee Aaladda Automatic Prefillable Glass Syringe
Mashiinka muraayadda muraayadda otomaatiga ah iyo mashiinka istaaga
Mashiinku waa qalab buuxin otomaatig ah oo ay weheliso buuxinta, gelinta fiilada iyo fur furida hal cutub. - dhalada ku quudinta dhalada aan kala goyn karin, kuna rog oo ku soo saar mashiinka buuxinta.